Electric moto kununura chishandiso fekitori - China Electric moto kununura chishandiso Vagadziri, Vatengesi
Injini DH65 Cylinder vhoriyamu, cm3 / cu mune 61.5 / 3.8 Cylinder bore, mm / inch 48 / 1.89 Stroke 34 / 1.34 Idle kumhanya, rpm 2600 Max. kumhanya, kuburutswa, rpm 9500 Simba, kw 3.5 Kufambisa sisitimu Mugadziri NGK Spark plug BPMR7A Electrode gap, mm / inch 0.5 / 0.020 Fuel and lubrication system Mugadziri Walbro Carburetor mhando HDA-232 Fuel vanokwanisa 0.7 Kurema Pasina mafuta uye cheka rekucheka, kg / lb 9.8 / 21.6 Mazinga eruzha Pakumhanya kwekumhanya, padanho reruzha dB (A) haifanire ...
Dhijitari jenareta yakaisirwa G1000i
Zvimiro 1, yega jenareta seti yaita yakaoma performance performance test. Inosanganisira 50% mutoro, 75% mutoro, 100% mutoro, 110% mutoro, uye tarisa & ongorora masisitimu ese ekudzora, mashandiro e alarm uye kumisa kuchengetedza mabasa. 2, chimiro chidiki uye chakareruka, iyo yemagetsi kurira inokwanisa kugadzirisa otomatiki kugovera kwemafuta zvinoenderana nemutoro, uye kudzora kushandiswa kwemafuta uye kabhoni dhayokisaidhi. 3, yakachena sine wave kuburitsa inogona kuendesa zvakananga zvese zvakakwirira zvakakwana zvemagetsi zvigadzirwa pasina kuwedzera ...
Anotakurika Rebar Anocheka
Model: KROS-25 Brand: American QUIP Hunhu: Kucheka chiyero: rebar, simbi pombi uye tambo Isu takawana chiGerman TUV CE Certification. Yakareruka, iri nyore kushandisa Yakasarudzika yakavakirwa-mukati hydraulic pombi Iyo ine ina inocheka uye mairi mashizha. Bhatiri inofambiswa: inokwanisa kucheka 25mm rebar kwenguva makumi mana Tekinoroji Tsanangudzo Battery lithium bhatiri 24V, 2.0 AH Kurema (ine bhatiri) 16kg Maximum yekucheka mashandiro 25mm Kucheka Simba 16MT Kucheka Speed ​​3s
Yekubhururuka bhegi mweya cushion
Mhepo inosimudza bhegi / Mhepo cushion Range Kununura vakaurayiwa vakavigwa nematongo Kununura basa kunzvimbo yekudengenyeka kwenyika Kununura patsaona yenjodzi Kununura panzvimbo yakavharirwa Nzvimbo Makomborero Kusimudza kukuru, kunogona kusimudza zvinorema kubva 1 tani-71 matani. Kurumidza kusimudza kumhanya (10,000 kgs pamasekonzi mana) Rough pamusoro, isiri-slip dhizaini Model QQDA-1/7 QQDA-3/13 QQDA-6/15 QQDA-8/18 QQDA-12/22 QQDA-19/27 QQDA- 24/30 QQDA-31/36 QQDA-40/42 QQDA-54/45 QQDA-64/51 Saizi (cm) 15 * 15 22.5 * 22.5 30 * 30 38 * 38 45 * 4 ...
Yega-ine mweya mweya wekufema une yakazara kumeso mask
PPE Chikamu Chekufema Zvishandiso / CE yakasimbiswa EN 136: 1998 Mafuridzi ekudzivirira ekuchengetedza. Masks akazara kumeso. Zvinodikanwa, kuyedzwa, kumaka. EN 137: 2006 Midziyo yekudzivirira yekufema. Yakazvimiririra-yakavhurika-dunhu yakamanikidzwa mweya yekufema midziyo ine yakazara kumeso mask. Zvinodikanwa, kuyedzwa, kumaka. Pamusoro pekutarisa Kwakanaka kumanikidza mweya kufema zvishandiso chishandiso chekufema uye kuchengetedza kwemuviri wemunhu nekushandisa yakamanikidzwa mweya senge gasi sosi. Inonyanya kushandiswa mukurwira moto, kemikari, ...
Model: JSJ-S Brand: TOPSKY Kunyorera Iyo Rescue Tripod inoshanda kune yakadzika madziro, zvivakwa zvepamusoro-soro uye chero kumwe kusimuka kwepamusoro. Iyo yakagadzirirwa ne systemic kununura chengetedzo sunga uye tenzi kukiya. Zviri nyore kwazvo kuti vashandisi vashandise. Iyo inokodzera masangano emoto uye eruyamuro. Structure Mainstay, chipfuramabwe, winch, Mhete Inodzivirira Chain, maviri akasarudzika tenzi kukiya, 2 systemic harness, bata-musana tambo Key Feature 1.Scalable gumbo rakagadzirwa rakakwirira simba lightweight chiwanikwa. Chinhu chekuchengetedza ...
Twin Vakaona / Dual Vakaona
Muenzaniso: CDE2530 Zvikumbiro CDE2530 inoshandiswa zvakanyanya mumunda weMoto, Emergency Rescue, Electric Power, Telecommunications kuvaka, civil architecture, Demolition zvichingodaro. Kucheka Chinyorwa: simbi, simbi chubhu, tambo, aluminium (uchishandisa mafuta ekuzora), huni, wallboard, mapurasitiki nezvimwe. Hunhu Ikozvino chishandiso chinonyanya kushanda. Zvinotora masekondi matatu chete kumanikidza aruminiyamu madhoo. CDE2530 yakachengeteka uye yakavimbika. Akangwara control panel yakavakwa mumuchina wekucheka ...
Kunyorera MF15A gasi mask ndeye mbiri yekudzivirira yekufema michina ine canister firita. Iyo inogona kunyatso chengetedza vashandi kumeso, maziso uye yekufema turakiti kubva kune vamiririri, zvipenyu zvehondo vamiririri uye radioactive guruva kukuvara. Inogona kushandiswa mumaindasitiri, zvekurima, zvekurapa uye zvevashandi vesainzi munzvimbo dzakasiyana uye nemauto, mapurisa uye kushandiswa kwevanhu. Kuumbwa uye hunhu Iyo inonyanya kunyorwa neyemask kufema, maviri ma canisters zvichingodaro. Mask inosanganisira ...
YYD05-20 Kupeta Magetsi Utsi Inotora
Mhedziso YYD05 / 20 rechargeable yemagetsi hutsi hwekunatsa, diki muhukuru, nyore kutakura, inokodzera kufamba, inogona kupedza utsi nekumhanyisa munguva pfupi, kuwedzera nguva yekununura; simba remhepo tekinoroji, super mhepo kumanikidza, utsi chiutsi mhedzisiro chinhambwe chemamita 1-3 kubva pamusuwo wakaenzana, zvinobudirira kudzikisira kwemukati tembiricha yemoto poindi, kunatsiridza kuoneka muchivako, kudzora moto kune sosi yemoto mukati imba, kudzikisira huturu, dzivirira firefight ...
BS80 Electric kuwedzera kiramba
Nhanganyaya Magetsi ekuwedzera kiramba pamwe nekuwedzera, kubvarura, kupomba uye kudhonza basa (ne traction cheni), inogona kuita yakakwira-mutoro mabasa ekudzikinura, uchishandisa yakakwira-simba isina huremu alloy.Iinogona kuvhurwa mukati me1 sekondi iyo inogona kudzikisira zvakanyanya nzira yekununura. Maviri makuru-inokwana 4AH lithiamu mabhatiri anobhadhariswa nekukurumidza uye anoshanda kwenguva yakareba kuti asangane nezvinodiwa zvekupokana nharaunda. Main technical technical parameter: Rated basa kumanikidza 72MPa Kuwedzera kureba 650mm Max. exp ...
BC80 Magetsi kucheka mapapiro
Nhanganyaya Magetsi ekucheka mapenji anogona kukurumidza kutema mapaipi, simbi yakasarudzika uye mahwendefa esimbi ezvinhu zvemota uye nesimbi zvivakwa. Inogona kuvhurwa mukati me1s iyo inogona kupfupisa nzira yekununura. Iwo maviri akakura-anokwanisa 4AH lithium mabhatiri anogona kukurumidza kubhadhariswa uye iyo yekushanda nguva inogona kuve yakareba. Sangana nezvinodiwa zvekupokana nharaunda. Main technical technical parameter: Rated basa kumanikidza 80MPa Shear simba 680KN Kucheka kutenderera simbi dhayamita (Q235 zvinhu) ...
BC350 Magetsi Hydraulic Kucheka Mapepa
PfupisoMagetsi ekucheka mapendi ndeye yakasanganiswa hydraulic kununura maturusi, anoshandiswa kucheka nekuparadzira mabasa ekununura; unozvishongedzera wega magetsi, hapana chinodiwa chekunze simba chishandiso, isina tubing dhizaini inotakurika mashandiro chero nguva uye pese pazvinogoneka; main zvikamu zvinoshandisa kubhururuka Aluminium Alloy, yakasimba simba, kurema uremu; yekuisa chisimbiso zvinhu zvese zvakatorwa kubva kuGerman. Kunyorera chiyero Kununura mune tsaona dzemumigwagwa, tsaona dzenjodzi, kunyanya inokodzera nzvimbo yepamusoro kununura uye ope yemunda ...